Telefaona Xiaomi roa no hanana Snapdragon 670 ho toy ny processeur | Androidsis
Xiaomi sy Qualcomm dia manana fifandraisana fiaraha-miasa akaiky. Izany no antony ampiasain'ny telefaona marika shinoa ny processeur Snapdragon. Zavatra mbola hitohy amin'ity taona ity. Snapdragon 670 io dia iray amin'ireo mpikirakira vaovao an'ny orinasa, izay mbola tsy nahatratra ny tsena. Saingy efa misy telefaona roa an'ny marika sinoa izay hampiasa azy io.
Tsaho sy fivoahana maro samihafa no nipoitra tamin'ny haino aman-jery isan-karazany. Misaotra azy ireo dia fantatra izany Mandritra ny taona 2018 dia afaka manantena isika fa hisy telefaona Xiaomi roa izay hanana Snapdragon 670 amin'ny maha-processeur anao. Na dia tsy fantatra aza hoe ho modely inona izy ireo.
Ny talen'ny famoahana ny XDA Developers no niandraikitra ny famoahana ity vaovao ity. Ary koa, ireto finday Xiaomi ireto dia toa efa manana anarana kaody. Comet sy Sirius no anaran'izy ireo. Io no fantatra momba ireo fitaovana roa an'ny marika sinoa hatreto. Ho fanampin'ilay mpanodina azy.
Logic dia milaza amintsika fa ny iray amin'ireo telefaona dia ny Xiaomi Mi Note 4. Hatramin'ny Mi Note 3 dia manana Snapdragon 660 ho toy ny processeur. Ka tsy ho tsy mitombina ny fieritreretana fa ny mpandimby azy no hitondra ilay mpanera manaraka ao amin'ilay faritra. Azo antoka tokoa ny iray amin'ireo telefaona roa misy Snapdragon 670 dia io. Momba ny hafa dia tsy misy fampahalalana na clue amin'izao fotoana izao.
Satria fantatsika fa ny marika sinoa dia handefa fifandimbiasana maro amin'ireo tandavanany. Na dia tsy fantatsika aza raha hisy telefaona vaovao na faritra vaovao. Mampidi-doza tokoa ny fizahana milaza izay mety ho telefaona hafa. SMomba ny processeur dia efa fantatsika ny antsipiriany iray hafa, ary izany dia hanana fitambaran'ny atody 2 + 6 izy io.
Azo antoka mandritra ny herinandro vitsivitsy andao hahafantatra bebe kokoa momba ireo telefaona Xiaomi ireo miaraka amin'ny Snapdragon 670 ho mpikirakira. Manantena ihany koa izahay ny hahafantatra ny daty izay hahatratra ny tsena ny processeur Qualcomm.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Xiaomi dia handefa telefaona roa miaraka amin'ny Snapdragon 670 eny an-tsena